Ndị na-ere ngwaahịa na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nsị na nri ala YiZheng
Na Cometị kwụ ọtọ Gbaa ụka tank tumadi iji na-atụgharị na mix organic n'efu ka anụmanụ nsị, sludge n'efu, sugar mill milling mud, nri ọjọọ na ahịhịa fọdụrụ sawdust na ndị ọzọ organic n'efu maka anaerobic gbaa ụka. A na-eji igwe ahụ eme ihe n'ọtụtụ ebe na fatịlaịza organic, sludge dump plant, hotikoishịlọ ọkpọ, gbaa ụka nke okpukpu abụọ spore decomposition na mwepụ nke mmiri ọrụ.
Enwere ike ịgbakwunye igwe ahụ ruo awa 24, na-ekpuchi mpaghara nke 10-30m2. Enweghị mmetọ site na ịmalite ịgba ụka. Enwere ike gbanwee ya na 80-100 ℃ dị elu maka iwepu pests na akwa ya kpamkpam. Anyị nwere ike ịmepụta ihe ngosi 5-50m3 dị iche iche ikike, ụdị dị iche iche (kwụ ọtọ ma ọ bụ vetikal) tankị gbaa ụka.
Gini bu Vetikal Waste & Nri gbaa ụka Tank?
Vetikal Waste & Nri Fermentation Tank nwere njirimara nke obere gbaa ụka, kpuchie obere mpaghara na gburugburu ebe obibi. Emechi tankị na-emechi emechi nwere usoro itoolu: sistemụ nri, silo chernobyl, sistemụ hydraulic, sistemụ ikuku, sistemụ orụ, kpochapu na deodorization sistemu, ogwe aka na usoro ntanetị A na-atụ aro anụ ụlọ na nsị anụ ọkụkọ ịtinye obere ego nke ndị na-apụ apụ dị ka ahịhịa ọka na microbial inoculum dịka ọdịnaya mmiri ha si dị na uru okpomọkụ ha. A na-etinye usoro nri n'ime silo chernobyl, na feces na-ama jijiji site impeller pupụtara nke ịnya ụgbọ ala usoro na-etolite a na-aga n'ihu agitation ala na silo. N'otu oge ahụ, ngwaọrụ ikuku na ikpo ọkụ nke akụrụngwa na-enye ikuku ikuku na-ekpo ọkụ maka ikuku aeration. A na-etolite otu ebe ikuku na-ekpo ọkụ dị na azụ nke agụba, nke na-enwe mmekọrịta zuru oke na ihe maka ikuku oxygen na nnyefe ọkụ, dehumidification na ventilashion. A na-anakọta ikuku ma mesoo ya site na ala nke silo ahụ site na nchịkọta. Ọnọdụ okpomọkụ dị na tank ahụ n'oge gbaa ụka nwere ike iru 65-83 Celsius C, nke nwere ike ịgba mbọ igbu ọtụtụ nje. Mmiri mmiri nke ihe ahụ mgbe gbaa ụka bụ ihe dịka 35%, na ngwaahịa ikpeazụ dị mma na fatịlaịza na-adịghị emerụ ahụ. The chernobyl bụ mechiri emechi dum. Mgbe anakọtara isi ahụ site na pipeline dị n'elu, a na-asa ya ma deodorized ya site na ịgba mmiri ma hapụ ya na ọkọlọtọ. Ọ bụ ọgbọ ọhụrụ nke fatịlaịza fatịlaịza organic nke kwesịrị ekwesị maka mpaghara dị iche iche, dabere na ngwa ndị yiri ya na site na mmelite na nkwalite. Advanced technology larịị na kwadoro site na ọtụtụ ndị ahịa.
Gini bu Vetikal Waste & Nri gbaa ụka Tank Ji?
1.The Vetikal Waste & Nri Fermentation Tank akụrụngwa nwere ike iji mee ihe maka ọgwụgwọ nke ezi nri, nsị anụ ọkụkọ, nsị ehi, nsị atụrụ, nsị ero, mkpofu ọgwụ ndị China, ahihia ahihia na ahihia ndi ozo.
2. Ọ chọrọ naanị awa 10 iji mezue usoro ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ, nke nwere uru nke ikpuchi obere (igwe gbaa ụka na-ekpuchi naanị mita 10-30).
3. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma iji ghọta ntinye n'ọrụ nke ihe mkpofu maka ụlọ ọrụ ugbo, ọrụ ugbo gburugburu, ọrụ ubi.
4. Na mgbakwunye, dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, anyị nwere ike ịhazi ikike 50-150m3 dị iche iche na ụdị dị iche iche (kwụ ọtọ, vetikal) nke tankị gbaa ụka.
5. Na usoro gbaa ụka, aeration, ịchịkwa okpomọkụ, mmekpa ahụ na deodorization nwere ike ịchịkwa na-akpaghị aka.
Vetikal Waste & Nri Fermentation Tank Atụmatụ
Nhicha onodu CIP na ntaneti nwa (121 ° C / 0.1MPa);
2. Dị ka ihe dị mkpa nke ịdị ọcha, Ọdịdị imewe dị nnọọ humanized na mfe iji rụọ ọrụ.
3. ratiodị kwesịrị ekwesị n'etiti dayameta na ịdị elu; dịka ọ dị mkpa iji hazie ngwaọrụ agwakọta, ya mere ike nchekwa, na-akpali akpali, mmetụta gbaa ụka dị mma.
4. Ngwongwo nke dị n'ime nwere ọgwụgwọ polishing dị n'elu (ike ike Ra erughị 0,4 mm). Ọpụpụ ọ bụla, enyo, oghere olulu na ihe ndị ọzọ.
Uru nke Vetikal Waste & Nri Fermentation Tanky
•Vetikal imewe na-ewere obere ogide ohere
•Mechie ma ọ bụ akara gbaa ụka, enweghị isi n'ikuku
•Wide ngwa obodo / ndụ / nri / ogige / nsị n'efu ọgwụgwọ
•Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ iji nyefee mmanụ na mkpuchi mkpuchi owu
•Ime nwere ike ịbụ igwe anaghị agba nchara na ọkpụrụkpụ 4-8mm
•Na-egbochi ihe mkpuchi oyi akwa ka mma composting okpomọkụ
•Na ike kabinet ịchịkwa okpomọkụ na-akpaghị aka
•Mfe iji ma jigide ma nwee ike iru nhicha onwe
•Paddle mixing shaft nwere ike iru zuru oke ma jikọta ngwakọta na ngwakọta ihe
Chain efere Composting Turner Machine Video Display
Nke gara aga: Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner
Osote: Forklift Comdị Composting Equipment